Manchester United Iyo Real Madrid Oo Laga Tuuray Figta Sare Ee Kooxaha Ugu Taajirsan, City & PSG Oo Meel Hoose Galay Iyo Koox Cabanaysa Oo 1aad Timid - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United Iyo Real Madrid Oo Laga Tuuray Figta Sare Ee Kooxaha Ugu Taajirsan, City & PSG Oo Meel Hoose Galay Iyo Koox Cabanaysa Oo 1aad Timid
Manchester United Iyo Real Madrid Oo Laga Tuuray Figta Sare Ee Kooxaha Ugu Taajirsan, City & PSG Oo Meel Hoose Galay Iyo Koox Cabanaysa Oo 1aad Timid
April 12, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga, Wararka Premier League 0
Manchester United ayaa laga tuuray saddexda kaalmood ee ugu sarreeya ee kooxaha ugu qiimaha badan kubadda cagta dunida, waxaana kaalinta ugu sarraysa soo gashay koox dhaqaale xumo ka cabanaysa oo sannadkii ugu dambeeyey aan wax koobab ah ku guuleysanin.
Red Devils ayaa qiimaheeda lagu sheegay £3.05 bilyan oo Gini, waxayna ku jirtaa kaalinta afraad iyadoo ku xiga Bayern Munich oo saddexaad usoo dallacday.
Wargeyska dhaqaalaha wax ka qora ee Forbes ayaa daabacay kooxaha ugu qiimaha badan, waxaana sida Manchester United oo kale hoos u dhacday kooxda reer Spain ee Real Madrid oo ay isbeddeli jireen Manchester United.
Real Madrid ayaa u dhacday kaalinta labaad iyadoo qiimaheedana lagu qiyaasay £3.46 bilyan, waxaanay wax yar ka hoosaysaa Barcelona oo kaalinta koowaad soo gashay isla markaana qiimaheedu yahay £3.46 bilyan oo Gini, isla markaana sanaati yar ka sarraysa Real Madrid.
Barcelona oo ka cabanaysa dhaqaale xumo, sannadkii horena aan wax koob ah ku guuleysanin ayaa si lama filaan ah kaalmaha sare uga riixatay Real Madrid iyo Manchester United, kuwaas oo uu dhaqaalahooda saamayn ba’an ku yeeshay fayraska Korona.
Kooxda difaacanaysa Champions League ee Bayern Munich ayaa kaalinta saddexaad soo gashay iyadoo qiimaheedana uu wargeyska Forbes ku sheegay £3.07 bilyan oo Gini, waxaanay wax yar ka sarraysaa Manchester United oo afraad ku jirta, qiimaheeduna hoos ugu dhacay £3.05 bilyan oo Gini.
Liverpool oo ay iska leeyihiin maalqabeennada Maraykanka ah ee John Henry iyo Tom Werner, xilli ciyaareedkii horena ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa shanaad kusoo gashay £2.98 bilyan oo Gini, halka Manchester City oo ku fadhida qasnadda lacagta ee laga soo hooyo saliidda Imaaraadka Carabta, ay iyaduna u degtay kaalinta lixaad, qiimaheeduna yahay £2.91 bilyan oo Gini.
Chelsea oo uu mulkiile ka yahay taajirka Ruushka u dhashay ee Roman Abramovich ayaa iyadana lagu qiimeeyey £2.33 bilyan oo Gini, halka Arsenal oo uu leeyahay maalqabeenka Maraykanka ee Stan Kroenke ay ku jirto siddeedaad, waxaanu qiimaheedu yahay £2 bilyan oo Gini.
Tottenham oo siddeedaad ah, ayaa qiimaheedu yahay £1.67 bilyan oo Gini, waxaanay waxyar ka horreysaa PSG oo tobnaad kaga jira liiska.
Akhriso tobanka kooxood ee ugu qiimaha badan dunida: